Cabdqaadir Cosoble; “Hal maalin in xukuumada loo kordhiyo ma aqbali doono” | Jowhar Somali news Leader
Home News Cabdqaadir Cosoble; “Hal maalin in xukuumada loo kordhiyo ma aqbali doono”
Cabdqaadir Cosoble; “Hal maalin in xukuumada loo kordhiyo ma aqbali doono”
Kulan wadatashi ah oo uu soo agaasimay xisbiga ILEYS oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa loogaga hadlay Maqaamka Muqdisho,iyadoo kulankan ay ka qeybgaleen madax ka mid ah xisbiyada siyaasada ee dalka ka dhisan waxgarad, siyaasiyiin, cuqaal,dhalinyaro,haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Waxgaradkii ka qeybgalay kulankan ayaa waxaa ay sheegeen in dowlada ay ka cagajiideyso inay dadka ku nool magaalada Muqdisho helaan matalaad iyo maqaamkooda.
Guddoomiyaha xisbiga Ileys Cabdqaadir Cosoble Cali oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay in gobolka Banaadir uu mudan yahay inuu helo metelaadiisa.
“Waxaan bilownay muddo dheer kahor sidii aan u raadin lahayn maqaamka Muqdisho,meel walba iyo kulan walba ayaan ka sheegnay ,Madaxweyne Farmaajo aan maalin walba u sheegeynay in shacabka Muqdisho ay helaan xuquuqdooda.”ayuu yiri xildhibaan Cosoble oo ka hadlayay kulanka.
Sidoo kale Xildhibaan Cosoble ayaa kulankan hadalka uu ka jeediyay waxa uu markale ka digey in muddo kororsi ay sameyso xukuumadda waxana uu farriin u direy xildhibaanada golaha shacabka .
“Xildhibaanada u durbaan tumaya madaxweynaha oo muddo kordhin ayaan kuu sameyneynayaa u sheegaya ha ogaadaan inaan ka yeelayn in hal maalin xitaa lagu kordhiyo. ”ayuu yiri xildhibaan Cosoble oo ka hadlayay kulanka.
Waxaa sii xoogeysanaya diidmada ay xisbiyada siyaasadda hogaamiyaashooda ay ka biya diidayaan in dib loo dhigo doorashada dalka oo lagu wado in ay dhacdo dhamaadka sanadkan.